Iindaba-Iwaranti yoMgangatho weFanitshala yaseAmazons
IWaranti yoMgangatho weFanitshala yaseAmazons
Iminyaka emi-3 yokuKhusela
Iinkonzo zasemva kwentengiso & nesiqinisekiso sokuBuyelwa kweMali
Nceda uqaphele: iwaranti ayigubungeli umonakalo owenziwe ngabom, ukufuma okukhulu, okanye umonakalo owenziwe ngabom.
* Ukongeza, sikwaqinisekisa ukuba zonke iimveliso zethu ziya kusebenza xa uzifumana ngaphandle kokuba kuchazwe ngenye indlela. Ukwaneliseka kwakho kubalulekile kuthi, ngoko ke ukuba imveliso yakho yi-DOA (ifile ekufikeni), sazise, ​​kwaye uyibuyisele kuthi ngaphakathi kweentsuku ezingama-30 zomhla wokuthenga. Siza kuthumela enye into endaweni yakho kamsinya nje sakuba sifumene into yakho ebuyisiweyo (Iindleko ezinxulumene nokubuyisela izinto azibuyiswa. Siya kuhlawula iindleko ezenziwe ngokuthumela ukutshintshwa).
* Iwaranti iya kuba lilize ukuba iimveliso zisetyenziswa gwenxa, ziphathwa kakubi, okanye zilungiswe ngayo nayiphi na indlela.
• Imirhumo yokubuyisela isitokhwe kwakhona inokwenziwa kwiimeko zokubuyiselwa ngenxa yokutshintsha kwengqondo. Kubathengi bamazwe ngamazwe kuphela
* Iintlawulo ezivela ngaphandle, iirhafu, kunye neentlawulo azifakwanga kwixabiso lezinto okanye iindleko zokuthumela ngenqanawa. Ezi ntlawulo ziluxanduva lomthengi. * Nceda uqhagamshelane ne-ofisi yelizwe lakho ukuze ubone ukuba ezi ndleko zongezelelweyo ziya kuba yintoni na ngaphambi kokuba ubhide okanye uthenge.
* Ukusetyenzwa kunye nokuPhathwa kweentlawulo kwizinto ezibuyiswayo luxanduva lomthengi. Imbuyekezo iya kukhutshwa ngokukhawuleza njengoko kunokwenzeka kwaye umthengi uya kunikwa isaziso se-imeyile. Imbuyekezo isebenza kuphela kwindleko yento ethi I-Disclaimer
Ukuba uyonwabile ngokuthenga kwakho, nceda wabelane ngamava akho nabanye abathengi kwaye usishiyele ingxelo entle. Ukuba awanelisekanga ngokuthenga kwakho nangayiphi na indlela, nceda uthethe nathi kuqala!
Siyavuya ukukunceda ukusombulula nayiphi na ingxaki kwaye ukuba imeko ifuna oko, siya kubonelela ngembuyiselo okanye ukutshintshwa.
Sizama ukunceda abathengi bethu ukuba balungise nayiphi na ingxaki phakathi kwemida efanelekileyo.
Ngokuxhomekeke kwimeko, sisenokwamkela izicelo zewaranti
Ixesha lokuposa: Sep-15-2020
Umsebenzi wokufunda we-IKEA onentsingiselo kakhulu
Kulixabiso lethu ukubonelela ngekhwalithi ephezulu...
Thatha ukuba undwendwele inkampani yefenitshala ye-IKEA
No. 300 Yuanfeng Street, Shengcheng Subdistrict, Shouguang, Weifang, ShanDong Province, China
Sitsalele umnxeba Ngoku: 008613792661055